DEG DEG: Ciidamo gadoosann oo ka tirsan Milatariga Soomaliya oo Goordhaw la wareegay….. – Kismaayo24 News Agency
DEG DEG: Ciidamo gadoosann oo ka tirsan Milatariga Soomaliya oo Goordhaw la wareegay…..
by Tifaftiraha K24 20th December 2016 047
Sida ay sheegayan Warar goordhaw aan ka helnay qeybo kamid ah Gobolka Shabeelada dhexe Ciidamo gadoodsan ayaa la wareegay Dhowr koontarool oo lagu qaado Lacago Canshuuro ah kuwaasi oo ku yaala Deegaano Hoostaga Jowhar iyo Balcad.
Ciidanka ayaa la sheegay in ay ka Cabanayeen Mushaar la’aan Waxaana ay qabsadeen Saddex Kontorool oo ku kala yaal Deegaanada Qalimow, Garsaale iyo Ceelka-Geelow oo hoostaga Degmooyinka Jowhar iyo Balcad ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Ciidanka wax dagaal ah kalama aysan kulmin Ciidankii Fadhiyay Koontaroolada lagu qaado Lacagaha Lagu sheego Canshuurta waxaana Saraakiisha Ciidamadaasi hogaamineysa ay sheegeen in Ciidanka ay weli helin xaqooda ayna ku qasbanyihiin in Gadood ay sameeyaan si Xaqooda ay u helaan.
Ciidanka la wareegay Koontaroolada ayaa la sheegay in ay ka tirsanyihiin Milatariga Soomaliya oo ku sugan Gobolka Shabeelada Dhexe.
Maamulka Gobolka ayaa ku howlan sidii ciidankaasi looga qaadi lahaa Koontaroolada ay la wareegaan waxaana hada socda wada hadal u dhaxeeya Saraakiisha Ciidanka Gadooday hogaamineysa iyo Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka.
War Cusub: Madaxweynayaasha Turkiga iyo Ruushka oo si aan Caadi aheyn uga hadlay Weerarkii lagu dilay Safiirka Ruushka u fadhiyay Ankara
Xsaaasi: Akhriso Puntland oo Shaqada ka joojisay Sarkaal Sare oo ka tirsan Ciidanka Booliska Maamulkaasi+Magaciisa iyo Sababta shaqada looga joojiyay
Daawo: Maxaadan ogeyn oo ay ka wada hadleen madaxweyne farmaajo iyo ra’isul wasaare ku xigeenka turkiga Veysi Keynak?
Tifaftiraha K24 2nd April 2017
Dhagayso:- Gudoomiyaha Magaaladda Baydhabo oo ka Hadlay Arimo Xasaasi ah oo Maamulkooda quseeya
TOP NEWS: Kiiska Shaqaaqadii dhawaan ka dhacday Magaalada Jowhar oo lagu Wareejiyay Masuul aan Caadi aheyn
Tifaftiraha K24 21st November 2016